व्यस्तता बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ। गोप्य सूचना बाहिरिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। बेसुरमा काम गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। समयमा गम्भीर नबन्दा व्यर्थैमा दुस्ख पाइनेछ। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। कामको चाप बढ्नेछ भने बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि अलमल्याउन सक्छ।
आज तपाईको राशिफलले के भन्छ ? हेर्नुहोस् (फागुन १२ गते) को राशिफल
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो,…
आज महाशिवरात्रि शिवको दर्शन गरेर पढ्नुहोस (फागुन ९ गते) को राशिफल
यी राशिका लागि हुनेछ आज लाभ ! हेर्नुहोस् (फागुन ८ गते) को राशिफल
हेर्नुहोस् यस्तो छ तपाईको आज(फागुन ७ गते) को राशिफल